Midowga Afrika oo ku baaqay in la qaado Cunaqabteynta hubka ee Soomaaliya • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Federal Republic of Somalia / Midowga Afrika oo ku baaqay in la qaado Cunaqabteynta hubka ee Soomaaliya
Midowga Afrika oo ku baaqay in la qaado Cunaqabteynta hubka ee Soomaaliya
Posted: Khalid Yusuf - October 14, 2012
Kadib markii bishii Agoosto la sheegay in dalka Soomaaliya dowladeeda ka baxday xiliga kumeel gaarka ayaa waxaa soo baxayey baaqyo ah in si dib loogu dhisi lahaa Dowlad rasmi ah oo Soomaaliyeed si markaasi wadanka uga soo kabto dagaaladii sokeeye ee la degay dalka 21kii sano ee lasoo dhaafay.
Waxaa todobaadkan Midowga Afrika oo ah ururka ugu weyn ee dhanka Militariga gacanta kasiiya dowlada Soomaaliya, isla markaana ciidamadooda AMISOM yihiin kuwa hormuudka u ah in gobalada koonfureed qeybo badan oo kamid ah laga saaro Al Shabaab, ay soo bandhigeen codsiyo iyo qorshe ay Midowga Afrika ku doonayo in cunaqabateynta hubka looga qaado dalka Soomaaliya.
Dalka Soomaaliya ayaa waxaa saaran cunaqabteyn dhanka hubka ah tan iyo sanadkii 1991kii kadib markii dagaalka Sokeeye uu ka qarxay wadanka.
Sanadkii 2007dii qaraar kasoo baxay Qaramada Midoobay ayaa lagu sheegay in cunaqabteynta hubka ee saaran ay banaanka ka yihiin ciidamada Midowga Afrika ee Soomaaliya ku sugan (AMISOM) oo ayagu hub ay lasoo degi karaan kaligood.
UN resolution 1744 specified that the arms embargo would not apply to supplies of weapons, military equipment, and technical training and assistance intended solely for the support of use of the African Union mission to Somalia (AMISOM) mission and its restoration and humanitarian work.
Todobaadkan kulankii Midowga Afrika ku yeeshay magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya ayaa looga hadlay in Qaramada Midoobay looga codsado in ay qaado cunaqabteynta hubka mar hadii Soomaaliya dowlad rasmi ah yeelatay isla markaana loo baahan yahay si dib u dhis loogu sameeyo hay’adaha Amniga ee Qaranka Soomaaliya.
Dhawaaqa kasoo yeeray dhanka Midowga Afrika oo qoraalka kasoo saaray maalinimadii Khamiistii lasoo dhaafay (11 Oktoober 2012) ayaa ah mid ay su’aalo badan iska weydiinayaa khubarada dhanka amniga ee Afrika iyo Reer Galbeedka.
Waxaa lagu yiri Qoraalka Midowga Afrika kasoo saareen kulankoodii looga hadlay Amaanka dalka Soomaaliya:
In this regard, Council called for urgent steps to be taken to restructure and empower the Somali Defense and Security Sector, including through the supply of stipends, equipments and weapons within a transparent and orderly framework, including the lifting of the arms embargo as it relates to the NSF, while maintaining it against non-state actors.
Su’aalaha la isweydiinayo ayaa ah ayadoo aan weli dalka Soomaaliya laga hirgelin dib u heshiisiin rasmi ah isla markaana aan la mideyn maamulada ka jira dalka Soomaaliya, ayadoo su’aalaha la isweydiinayo ay kamid yihiin:
1- Sidee ayey khatar u noqon kartaa Amniga Gobalka hadii Dowlada Soomaaliya ee fadhigeedu yahay Muqdisho oo kaliya loo ogolaado inay hubka Soomaaliya kala soo degto?
2- Hadii cunaqabteynta dalka Soomaaliya laga qaado waxay taasi sidoo kale fududeyn kartaa in ganacsatada hubka ee caalamiga ah ay u fududaato inay hubka Soomaaliya usoo geliyaan si musuq maasuq ah oo ka baaxadweyn sida hada dhacda, maadaama ay jiraan kooxo badan oo gudaha Soomaaliya ku hubeysan oo si dadban hub u keensan karaan.
3- Sidee u arkaan maamulada kale ee dalka Soomaaliya ka jira sida Puntland iyo Soomaaliland oo ayagu sharciyan dal ahaan weli hoostaga Maamulka Federaalka Soomaaliya ee Muqdisho laga dhisay, maadaama qoraalka Midowga Afrika lagu yiri Cunaqabteynta lagama qaadi doono qolyaha (NON-STATE ACTORS).
4- Ciidamada Dowlada Federaalka Jamhuuriyada Soomaaliya sidee u noqon karaa ciidamo Soomaalida oo dhan u dhantahay oo si siman dalka uga shaqeeya, maxayse tahay khatarta ka imaan karta in ciidamadaasi mustaqbalka isu bedalaan kuwo qabiil oo halis sii geliya amniga hada liita ee dalka Soomaaliya?
5- Sidoo kale ciidamada Soomaaliya oo ay hada ku jiraan kooxo badan oo horey dagaalada sokeeye uga soo qeyb qaatay, habka lagu soo xulayo ama lagu dhisayo ma ka marnaan doonaan dadka loo heysto danbiyada dagaal ee dalka Soomaaliya ka dhacay?
Dhanka kale waxaa ayaguna jira dad badan oo ay kamid yihiin Mas’uuliyiinta Dowlada Soomaaliya oo ku doodaya in dalka aan amnigiisa la wada sugi karin hadii aan dowlada loo ogolaan in si dhameystiran ay ciidamadeeda u dhisto.
Dhamaan qodobadan ayaa kamid ah kuwa la isweydiinayo, mana cada in Qaramada Midoobay ay xiligan cunaqabateynta hubka ay ka qaadi doonto dalka Soomaaliya.